DOOD FURAN: Shariif Xasan Kadib Heshiiskii Kampala iyo Roadmap-ka Maxaa ka Hirgali Doona? | Moment Union Somali Diaspora
Waxaa cirka isku shareeray khilaafka u dhexeeya mudanayaasha barlamaanka KMG Soomaaliya oo u kala qeybsan labo dhinac ka dib markii maalintii Talaadada ee 13-ka bishan oo mudanayaal gaaraya 283 ay u codeeyeen xil ka qaadista gudoonka barlamaanka.
Mudanayaasha waxay hadda u kala qeybsan yihiin dhinac diidan xil ka qaadista afhayeenka barlamaanka isla markaana ku tilmaamay sharci darro inay ahayd iyo dhinaca kale oo ku adkeysanaya in gudoonka uu dhacay ayna dooranayaan gudoon cusub- Hadda xildhibaanadaasi gudoomiyaha KMG waxay u doorteen Madoobe Nuunow Maxamed.
Xil ka qaadista Shariif Xasan waxay timid iyadoo uu socday dhaqangelinta qorshaha roadmap-ka oo qeexaya arimo ay ka mid yihiin dib u habeynta barlamaanka, u gogol xaarka marxaladda kalaguurka iyo sameynta dastuur cusub.
Sidoo kale xil ka ceyrinta afhayeenka baarlamaanka ayaa timid iyadoo uu jiray heshiiskii Kamapala [KAMPALA ACCORD] oo 9-kii June ay si wadajir ah u saxiixeen madaxweyne Shariif iyo Shariif Xasan.
Waxaa markaa la isweydiinayaa heshiiskii KAMPALA oo dhigayey in mudo 12 bilood ah (oo weli socota) aan eedeyn laga keeni karin madaxda dawlada ma buray mise wuu jiraa?
Qorshaha roadmap-ka ee ay wado Qaramada Midoobay maxaa ku dhici kara?
Ma u aragtaa in xitaa masuul ka mid ah DKMG hadduu meesha ka baxo inaysan waxba u joogsan doonin???
One thought on “DOOD FURAN: Shariif Xasan Kadib Heshiiskii Kampala iyo Roadmap-ka Maxaa ka Hirgali Doona?”
Dib u Dhac Ku Yimi Shirkii Wadatashiga Ee Maanta Ka Furmi Lahaa Garoowe
Garoowe – SP – Xilli maanta la fillaayay in uu qabsoomo Shirka Wada-tashiga ee Soomaalida wejigiisii labaad, ayaa waxaa ku yimid dib u dhac baahsan, iyadoo aanu la shaacin xilliga rasmiga ah ee uu qabsoomi doono.
Shirka Wada-tashiga wejigiisii koowaad ayaa waxaa lagu qabtay bishii September magaalada Muqdisho, iyadoo wejigiisii labaadna la fillaayay in uu qabsoomi doono maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 15-ka December.
Shirkaan oo ay qabsoomidiisu masuul ka ahayd Maamul Goboleedka Puntland, ayaan weli ka hadal sababaha rasmiga ah ee uu maanta u qabsoomi waayay, laakiin waxaa jira warar madax banaan oo sheegaaya sababaha uu u baaqday.
Sababaha uu u baaqday ayaa waxaa lagu sheegay in iyadoo magaalada Garoowe aysan weli soo gaarin xubnihii ka qeyb gelli lahaa oo isugu jira Soomaali iyo Ajaaniib ah, islamarkaana lama oga waxa tani xigi doona.
Madaxda Dowladda Somalia oo iyana lagu waday inay maanta ka qeyb galaan shirkaan, ayaa waxay weli ku kala sugan yihiin dalka iyo dibadda, taasina waxay qeyb tahay dib u dhicida Shirka Wada-tashiga.
Shirkan oo ay soo qaban qaabisay Qaramada Midoobe, ayaan weli ka hadlin sababaha uu u baaqday, bacdamaa 12 cisho kahor ay sheegen in uu qabsooni doono 15-ka December oo maanta ku beegan